2014 - Saadaalin kooban oo ku saabsan xaaladda dhulka - Geofumadas
2014 - Saadaalin kooban oo ku saabsan duruufaha dhulka
Disember, 2013 AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, SuperGIS, uDig, dhowr
Waqtigii ayaa la xiray boggan, oo sida ku dhacda caadada kuwa naga mid ah ee xidha wareegyada sanadlaha ah, waxaan hoos u dhigayaa dhowr layman oo ah waxa aan filan karno sannadka 2014. Waxaan ka hadli doonnaa goor dambe laakiin maanta oo ah sannadka ugu dambeeya:
Si ka duwan sida kale ee cilmiga ah, inaga, isbeddellada waxaa lagu qeexay wareegga waxa ku dhacaya qalabka iyo isticmaalka internetka.
Dhinaca kale, kiniinno aad u adag + nidaamyo hawlgal oo karti badan + xalalka si tartiib tartiib ah u beddelaya Laptops = iibka kiniinno badan necessarily Khasab ma ahan inay ka jaban tahay laakiin la xiriirta awooddooda. Taleefannada casriga ah ayaa qaadaya booskooda isgaarsiinta iyadoo ay ugu wacan tahay xaddidaadda cabbirka.
Oo dhinaca of webka: Ku dhawaad ​​walba daruurtii ka, lalana xiriiro dhow software kasta oo badbaaday on desktop-ka, loo isticmaalo wax soo saar badan ee shabakadaha bulshada, waxtar lahayn in la keeno dunida dhabta ah si ay Been internetka.
Qalabka GIS ee lacag la'aan ah
Waxay noqon doontaa sanad xiiso u leh OpenSource. QGis, oo leh dhacdo goosad weyn; Maaddaama ay tahay barnaamij soo kordhay bulshada kadib, waxay lahaan doontaa caqabado kayar kuwa sii jiraya marka loo eego gvSIG, taas oo hadda leh bulshooyin badan laakiin inyar oo horumariyayaal dhammaystiran u heellan. Waan fahamsanahay oo aan ku hambalyeynaynaa dadaalka ay sameysay Hay'adda aasaasiga ah ee ah in la dhigo moodeelka, laakiin waxaan sidoo kale aaminsanahay in horay loo bilaabi karo, markii lacag badan ay qulqulaysay oo lagu maalgeliyay ku dhowaad labalaab, xoogaa soo daahday, taas oo markaa keenta qiimo sare oo waaritaan ah.
Software-ka bilaashka ahi ma ahan in la tartamo, laakiin kuma xirna kan ka fiican. Laakiin waxaa muhiim ah in lagu noolaado xallinta xaalad baahi sare leh oo ka timaadda isticmaaleyaasha, isbeddellada ku wajahan daruuraha, taleefannada gacanta ee nidaamyada Android, maadooyin badan oo isku dhafan oo fudud ee juqraafiga leh saxnaanta muuqaalka dhirta, codsiyada dareemayaasha meelaha fogfog iyo u dhawaanshaha joonjeerka.
Moodooyinka way ka duwan yihiin, laakiin waa inaad labadaba wax ka barataa. Caqabada caalamiyeynta gvSIG waa mid rajo leh, laakiin waa inay soo saartaa ganacsi bisil iyo fariimo isku dheelitiran. Dadaalka aan dib-u-cusbooneysiinin shaashadda QGis waa mid caqli-gal ah, laakiin waa inay ka hortagaan keli ahaanta taageerada-dhamaadka sare.
Ka hor inta aan aragno ujeedo leh GIS la-qaadan karo, laakiin hadda waxaan qabnaa aragtida Xuduudaha, oo hore loogu yaqaanay OpenGeo, oo hadda bixisa taageero iyo qiimo dheeraad ah oo ku saabsan xalka oo isku xira qayb ka mid ah deegaanka:
Awoodda QGis sida macaamil khafiif ah,
Dhammaan furayaasha OpenLayers,
Awoodda aan laga doodi karin ee GeoServer ee xogta ku jirta webka, ayaa lagu daray GeoWebCache si ay u sameyso kala-baxyada waxtarka leh,
Iyo PostGIS / Postgres ee maamulka, falanqeyn labadaba hoos ku qoran iyo daruuraha iyo gudbinta buugaagta aqbalaadda ku filan.
Su'aalaha waxaa looga baahan yahay:
Waa maxay qaybta kale?
Miyuu buug-yaraha ku xiran xariijintan?
Maxay noqon doonaan gvSIG Boundles?
Waa maxay isku dhafka MapServer?
UDIG ma gaari doonaa caan uu ka yahay walaalka weyn?
SEXTANTE miyey ka badbaado haddii uu kafaalaqaadiyuhu noqdo mid ku dhejisey GRASS?
Immisa keli ah ayaa horumariyay gvSIG hadda?
Intee in le'eg ayey ESRI isticmaashaa wejiga quruxda badan?
Qaar badan oo ka mid ah jawaabahani ma xiiseeyaan isticmaalaha caadiga ah, laakiin waxay xiiseynayaan go'aamiyaha, ama sababtoo ah waxay horey u qaateen, ama waxay u baahan yihiin si degdeg ah.
In kasta oo hubanti la'aan tahay, waa inaan qirno qanacsanaan weyn oo aan waligeed hore uhelin il furan barnaamijka 'GIS software' waqtigan rajo leh. Marka 2014 waa rajo, diiwaanka, maahan qof walba. Kuwani waxay caan ku yihiin abuurista nidaamka deegaanka, kuwa kale ee ku sii kordhaya bulshada, kuna takhasusay wax kasta.
Nidaamka gaarka ah.
Halkan waa isbedel, sababtoo ah danaha waa dhaqaale, sidaanu u aragno habdhaqan la mid ah kuwa ugu waaweyn:
ESRI, marka aad kuxirantahay.
AutoDesk waxay la xiriirtaa lamaanayaal waaweyn sababo la xiriira jilicsanaanta dhibaatooyinka suuqa saamiyada. Ka digtoonow in GIS aysan ahayn meheraddiisa, inuu wax badan ka helo wax soo saarka, animation iyo naqshadaha.
Intergraph ayaa sii kordheysa oo ka mid ah xalka ugu sarreeya ee ka kooban Geomedia + Erdas.
Bentley waxay iibsaneysaa macaamiil ganacsi oo dheeri ah oo soconaya, gaar ahaanna: kaabayaasha injineernimada iyo dhirta. Aagga GIS, kaliya u janjeeridda kiniiniyada iyo awoodda loola macaamilo kooxaha goobta jooga.
Mapinfo ... Ma jiraan wax mudnaanta PB ah?
Ma weynaantooda iyaga u gaar ah.
Supergis, iyada oo loo eego sida ay u shaqeyso ESRI, oo raadinaysa suuqyada galbeedka.
GlobalMapper, xasilloon, oo la dhibaataysan burcad-badeednimo oo aan cafin aalad aan wax walba qabanaynin laakiin waxay samayso ... Xushmadeena. Waxay si fiican u qabataa
Manifold GIS ... Ma jiro saadaal, ka dib sanado badan oo abaar ah marka loo eego gardarradii hore.
Kuwa kale ... Raadinta foomka caanaha.
Waxaa la yaab leh inta horumar ah ee aan horey u sameynay, iyada oo ay jirto wax si absi ahaaneed looga dambeeyo. In kasta oo dadaal la muujiyey, ma heli karaan waddo lagu xoojiyo bulshada ... taas oo sida aan qabo aan waligeed dhici doonin haddii ay diiradda saaraan anshax lafteeda oo duugowday. A 2D CAD si loo sameeyo qorshooyin dhisme oo aan laga fikirin BIM, ayaa lagu xukumay in la ilaabo.
Isbedelka ganacsiga ee 2014
Uguyaraan macnaha guud ahaan, waxay qaadan doontaa xoogaa muddo ah waxa aan ognahay inay dhici doonaan maalin uun: Qaabaynta dunida dhabta ah (BIM), halkaas oo anshaxyadu isugu imaan doonaan: qabashada xogta, geospatial, naqshadeynta CAD iyo kaabayaasha kaabayaasha.
Sannadka 2014 CAD wuxuu ku adkeysanayaa sameynta BIM, laakiin dariiqa uu ku socdaa wuu gaabin doonaa sababtoo ah qaan-gaarnimada heerarka. Gaabiska OpenSource ee CAD ayaa markale eedda leh, maadaama ay tahay midka cadaadiya isla markaana matooriya heerarka. Kuwa waaweyn ka mid ah, nashqadaynta ayaa wax yar u soo dhowaan doonta hawlgalka, qaar BIM ah laakiin ku xaddidan in loo isticmaalo xaalado gaar ah. Natiijada ugu fiican waxay ku meeraysan doontaa heerarka magaalooyinka caqliga badan, ee horay u socda, hadda si soosaarayaasha iyo horumariyeyaashu ay uga fikiraan inay diyaar ahaadaan, laakiin weli wax badan ayaa sugaya.
Waxay u noqon doontaa sanad weyn Cadastre, aan xusuusano sanadka uu yahay, hubaalna in sigaar cabayaashu ay sii wadi doonaan falanqaynta adag ee wixii kudhacay bayaanadii Cadastre 2014. Qaabdhismeedka sigaar cabista, horumar badan ayaa laga sameeyay heerarka iyo tusaalooyinka dhabta ah ee LADM, wax badan ayuu dhintay Laga soo bilaabo sawir gacmeedka caadiga ah, akadeemiyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa si fiican isu taagay, laakiin dhammaan hay'adaha dowliga ah iskuma aysan hormarin isku mid, sidaas darteed dib u soo kabashada qiimaha ayaa su'aal ka taagan tahay iyo in sharciga dadweynaha uu runti u muuqdo sidii macluumaad ku saabsan shaqooyinka taas oo u fududeyneysa nolosha isticmaaleha.
Marka ganacsiga guud ee GIS wuxuu sii wadi doonaa inuu ku soo wareego juqraafi, taas oo ah guul weyn. Laakiin waxaan ka warqabnaa in GIS ay leedahay waxbadan oo ay bixiso, maadooyin fara badan oo wali ka faa'iideysanaya hodannimadeeda. Sannadkan wax badan ayaan ka filan karnaa qabashada iyo qaabaynta qalabka, in kasta oo aynaan dhihi karin inay xoojinayso isbeddellada ganacsi ee kuwa aan takhasuska u lahayn ay indhaha ku hayaan.
America waxay lahaan doontaa sanadkeedii fiicnaa, iyadoo indhaheeda ay ku jeedaan Koobka Adduunka ee Brazil, waxay soo jiidan doontaa dhacdooyin dhowr ah oo caalami ah. Oo waxaan arki doonnaa tijaabada lagu sameynayo Madasha Latin America ee Geospatial Forum Mexico.
Waa inaan noqonaa kuwa wanaagsan. Waan ku faraxsanahay inaan arkay akoonnada warbaahinta bulshada oo loo beddelay ganacsi, baloogyadu waxay helayaan awood, a NosoloSIG oo ku soo laabanaya guusha weyn, wiil ayaa si guul leh u dhameeya dugsiga sare, hooyada waayeelka ah waxay na siisaa hal sano oo dheeraad ah shirkad ...
... gabadh nalooga indho indhaheena sida markii ugu horeysay, mugdi madow, gaariga baabuurka, fasalka, daaqada nolosha ...
Wanaag iyo barwaaqo sannadka cusub.
Post Previous" Hore CartoDB, waxa ugu fiican ee lagu abuurayo khariidadaha internetka
Post Next Sidee khariidadda dunida waxay ku jirtay 1922Next »